Fametrahana vato fehizoron'ny asa fanamboarana ny tsenabe ao amin'ny kaominina Ivato-Antananarivo | Primature
Fametrahana vato fehizoron’ny asa fanamboarana ny tsenabe ao amin’ny kaominina Ivato-Antananarivo
Mahazoarivo, faha 01 jona 2018 – Nanome voninahitra ny lanonana fametrahana ny vato fehizoron’ ny asa fanamboarana ny tsenabe ao amin’ny kaominina Ivato ny Praiminisitra Lehiben’ny Governemanta Mahafaly Solonandrasana Olivier.
Telo volana no haharetan’ny asa ary nilaza ny Praiminisitra fa tsy azo sakanana ny fampandrosoana, natao hifaneraseran’ny mponina sy hampidi-bola ho an’ireo mpiavarotra sy ny kaominina, ary hanala fahasahiranana ny vahoaka izany tsena izany. Araka ny fanazavany dia tafiditra amin’ny vinan’ny Filohan’ny Repoblika ny asa hatao; vavahady idirana ny renivohitr’i Madagasikara rahateo, hoy izy, ny kaominina Ivato ka tokony ho loharanon’ny fampandrosoana, ary ho reharehan’ Ivato izao tsena izao satria anisan’ireo ho tsara indrindra ato anatin’ity Faritra Analamanga. Ilaina araka izany ny fametrahana rafitra fitsinjaram-pahefana tena izy mitodika amin’ny vahoaka, rafitra izay mahalala ny fahasahiranan’ny vahoaka ka ahafahan’izy ireo misitraka ny tombontsoa amin’ny fametrahana fotodrafitrasa. Manaporofo izany fa tsy ny Fitondram-panjakana no hahazo tombony fa ny vahoaka.
Manoloana ny fanahian’ireo mpivarotra madinika ny amin’ny tsy hisian’ny toerana hivarotany mandritra ny fanamboarana ny tsena dia nanentana ny vahoaka ny Praiminisitra, mba handefitra amin’izay zavatra mety hanahirana amin’ny fandaminana, ary nampirisika ny Ben’ny Tanàna hitady vahaolana amin’izany.
Nomarihiny koa fa azo atao tsara ny miara-miasa na tsy mitovy firehana politika aza, satria ny fampandrosoana no jerena. “tsy nijery loko politika ny Praiminisitra raha nanolotra ity fotodrafitrasa ity, ato amin’ny kaominina Ivato, fa ny fampandrosoana no jerena , ny fikatsahana ny tombontsoa ambonin’ny firenena no jerena” hoy ihany ny Praiminisitra.
Tsiahivina fa efa fampanantenana nataon’ny Lehiben’ny Governemanta ny hanamboarana ny tsenan’ Ivato, raha nitokana fotodrafitrasa maromaro teny amin’ny kaominina Ivato izy volana maromaro lasa izay, toy ny làlana mankany amin’ny INPF sy ny fitokanana CSB II tao Ambodirano.
← Lancement de deux projets financés par le PEACE BUILDING FUND (PBF)
Fianianana sy fametrahana ireo mpikambana mandrafitra ny Fitsarana Avo →
Échos de la visite du Premier ministre à Majunga